I-Samsung Cloud iya kunciphisa indawo yokugcina yasimahla ukusuka kwi-15 ukuya kwi-5 GB | I-Androidsis
Iinkonzo zokugcina ilifu ziyeyona ndlela ifanelekileyo yokugcina lonke ulwazi esoloko sinomdla wokuba nalo kwindawo enye. IMicrosoft, uGoogle, iDropbox ... ezahlukeneyo zezikhetho esinazo xa kuziwa Indawo yokugcina ikhontrakthi ngaphaya kwale basinika yona simahla.
Nangona kunjalo, kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukusebenzisa iinkonzo zokugcina ezikhoyo kwifowuni yethu yeselfowuni, eyiyeyona siyisebenzisela yonke into. Isamsung yenza i-15 GB yendawo ifumaneke kuthi simahla ukugcina iikopi zezicelo, idatha kunye neefoto zethu kunye nevidiyo. Ngelishwa eso sithuba siya kuncitshiswa ukusukela nge-1 kaJuni.
Ewe ewe, le ndlela injalo Iya kuchaphazela kuphela bonke abasebenzisi abenza iakhawunti kwi-Samsung emva kwe-31 kaMeyi. Bonke abo basebenzisi esele benayo iakhawunti ye-15 GB baya kuqhubeka nokugcina le ndawo yokugcina. Kusenokwenzeka ukuba utshintsho lwe-Samsung kule meko lubangelwa kukungasebenzisi kakhulu abasebenzisa i-15 GB kwisiphelo sabo.
Isizathu ayikho enye ngaphandle kwendawo yokugcina. I-15GB yindawo encinci kakhulu yokugcina zonke iifoto kunye nevidiyo esiyenzayo kwisiphelo sethu. Nge-5 GB, sinendawo eyaneleyo yokugcina izinto ezibaluleke kakhulu kwisiphelo sethu ezinjengee-backups, ulungiselelo.
Ukongeza, enkosi kwiifoto zikaGoogle, apho sinakho indawo yokugcina yasimahla ekumgangatho ophezulu kuzo zombini iifoto kunye neevidiyo, ukuqesha iinkonzo zokugcina ze-Samsung isenokungasincedisiNgaphandle kokuba yonke i-ecosystem yethu yenziwe ziitheminali ezivela kubavelisi baseKorea.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Cloud iya kunciphisa indawo yokugcina yasimahla ukusuka kwi-15 GB ukuya kwi-5 GB
IVivo Z5x: Ifowuni yophawu yokuqala enomngxunya kwiscreen